QM oo dib u dhisaysay masjidkii Alnuur ee magaalada Mosul (Sawirro) | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	QM oo dib u dhisaysay masjidkii Alnuur ee magaalada Mosul (Sawirro)
Sideed nakhshideeye oo u dhashay dalka Masar ayaa ku guuleystay tartan caalamiga ah oo hey’adda UNESCO ku doonayso in dib loogu dhiso masjidka qaddiimiga ah ee ku yaala magaalada Mosul ee dalka Ciraaq, affar sano ka dib markii kooxda ISIS ay qarxiyeen dhismaha masjidka Al-Nuur.
Waa masjidkii uu Abu Bakar al-Baghdadi kaga dhawaaqay ISIS 2014
Injineerada ku guuleystay mashruuca waxaa ay kala yihiin; Saalax Aldiin Samiir Xareedy, Khaalid Fariid Aldhiib, Shariif Faraag Ibraahim, Taarek Cali Maxamed, Nuux Mansuur Rayaan, Xager Cabdul Qani, Maxamuud Sacad Jamaal iyo Yusra Muxamed Albaxa.
Kooxda ISIS ayaa 2017 burburiyay masjidkan oo dhisnaa muddo 12 qarni ah.
Hey’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan dhaqanka iyo cilmiga ee UNESCO ayaa doonaysa in ay dib u soo nooleyso taariikhda Masjidka Al-Nuur.
Tartan ay ka qeybgaleen 123 injineer ayaa laga xushay sideed nin oo u dhashay dalka Masar kuwaas oo soo saaray nakhshadda ugu fiican ee Masjidka.
Nakhshadda cusub ee Masjid
Dagaalka Mosul waxaa ku dhintay kumanaan shacab ah iyadoo ku dhowaad hal milyan oo qof ay ka barakaceen, sidoo kale waxaa burbur xoogan uu soo gaaray badi dhismiyaasha qaddiimiga ahaa ee magaalada.
Burburka soo gaalay magaalada Mosul intii uu socday dagaalkii sagaalka bilood u dhexeeyay ciidanka dowladda iyo ISIS
”Dib u dhiska masjidka wuxuu uu noqon doonaa calaamadda horumarka dib u dhiska magaalada dagaalada burburiyeen,” sidaa waxaa tiri Audrey Azoulay oo ah agaasimaha hey’adda UNESCO.
Gudaha masjidka wuxuu u ahaan doonaa sidii hore, waxaase jiri doono isbedelo muhiim ah oo lagu sameyn doono waxaa kamid ah in nalalka iyo in la balaariyo meelaha haweenka iyo mas’uuliyiinta, ayaa lagu yiri bayaanka UNESCO.
Masjidka waxaa loogu magac daray Nuur al-Diin Maxamuud Zangi oo ahaa hogaamiyihii muslimiinta dagaalkii masiixiyiinta. Sanadkii 1172 ayaa la dhisay masjidka.
UNESCO ayaa tartankan bilowday bishii November 2020, iyadoo kaashanaysa wasaaradda dhaqanka Ciraaq, hey’adda awqaafta iyo dowladda Imaaaraadka Carabta.
Waa nakhshadda masjidka Alnuur oo dhameystiran
Hey’adda UNESCO ayaa injineerada ku abaal marisay $ 50,000 doollar, iyadoo dib u dhiska masjidka la filayo in la bilaabo dhammaadka sanadkan 2021.
QM oo dib u dhisaysay masjidkii Alnuur ee magaalada Mosul (Sawirro) was last modified: April 16th, 2021 by Admin